WE STAND WITH DAW AUNG SAN SUU KYI ဖြင့် မိမိတို့နိုင်ငံ၏ အခင်းအကျင်း (၂၀၁၉မှသည် ၂၀၂၀ အလွန် ယနေ့မိမိတို့နိုင်ငံအတွက် ညီညွတ်ကြမည့် စုပေါင်းအင်အားများ ) - Yangon Nation News
We STAND WITH DAW AUNG SAN SU KYI
ဖြင့် မိမိတို့နိုင်ငံ၏ အခင်းအကျင်း၊
(၂၀၁၉)မှသည် (၂၀၂၀) အလွန်
ICJ ၌ ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံအား လူမျိုးတုံးသတ်ဖြတ်သည်ဟူသော
စွပ်စွဲချက်ဖြင့် အဖွဲ့ဝင် ၅၇ နိုင်ငံပါဝင်သည့်
OIC ၏ ကိုယ်စား အဖွဲ့ဝင် ဂမ်ဘီယာနိုင်ငံက ကုလသမဂ္ဂ၏ တရားရုံးဖြစ်သော
နယ်သာလန်နိုင်ငံ The Hague မြို့ရှိအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ တရားရုံး ICJ တွင် အမူဖွင့်ထားခြင်းဖြစ်ပါတယ်။
မှန်သည် မှားသည် နိုင်သည် ရှုံးသည်ကတစ်ပိုင်း ဖြစ်ပါတယ်။
ရင်ဆိုင်ဖြေရှင်းရမှာက မိမိတို့နိုင်ငံ၏ တာဝန်နဲ့ကျင့်ဝတ် သိက္ခာဖြစ်ပါတယ်။
ဒါပေမယ်လို့သတိထားကြရမှာက ယခင်ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှနဲ့ တရားရင်ဆိုင်ခဲ့စဉ်က ၎င်းတို့နိုင်ငံမှ နိုင်ငံတကာမှာ ဝင်ဆန့်ကျယ်ပြန့်သည့် ရှေ့နေအုပ်စုကို ငွေကြေးကုန်ကြ သုံးစွဲပြီးငှားရမ်းရင်ဆိုင်ပြီး မိမိတို့ကသာ နိုင်ငံတွင်းမှ ဥပဒေသမားကိုသုံးခဲ့ကြပါတယ်၊
ယခုအမူတွင် ဤကဲ့သို့အဖြစ်ခံ၍ မရပါ၊
ဒါကို မိမိတို့နိုင်ငံသားအားလုံး မည်သည့် ဘာသာဝင်ဘဲဖြစ်ပါစေ သိထားကြဘို့လိုအပ်ပါတယ်။
ယခုအခါမှာ အမူကိုရင်ဆိုင်ဖြေရှင်းမည့်အဖွဲ့၊ လူပုဂ္ဂို လ်ကိုရွေးချယ်တာဝန်ပေးတဲ့အခါမှာ အထူးသတိထား သုံးသပ်ကြဘို့လိုအပ်လာပါတယ်၊
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် သွားစရာမလိုပါဘူး၊ အခြားလူ၊ ဥပမာ ဒုတိယဝန်ကြီးလိုပုဂ္ဂိုလ်မျိုးကိုလွှတ်ရင်လည်း ရပါတယ်။
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် သွားတာသည် 2020 အတွက် NLD ကမဲရအောင်လုပ်တာလို့ပြော
သို့ပေမယ်လို့ မိမိတို့နိုင်ငံ ထူထောင်တည်ဆောက်ပြီး ကောင်းမွန်သော ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးကို ဘယ်သူက ဆောင်ရွက်နိုင်တယ်၊
လုပ်နိုင်မယ် ဆိုတာကို ပြည်သူ ပြည်သားများစွာကသိပြီးသားဖြစ်ပါတယ်။
ဤတွင် မိမိတို့နိုင်ငံအခင်းအကျင်းကို နိုင်ငံတစ်ချို့ဘယ်လိုမျိုးသဘောထား လုပ်ဆောင်နေလဲ ?
အကျိုးအပြစ်က ဘာတွေ ဖြစ်လာနိုင်မှာလဲ ?
နက်နက် နဲနဲ ထိထိ ရောက်ရောက် စဉ်းစားကြပါလို့တိုက်တွန်းပါရ စေ။
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ဦးဆောင်ပြီး ရင်ဆိုင်တာနဲ့ အခြားပုဂ္ဂိုလ် တစ်ဦးက ဦးဆောင်ရင်ဆိုင်တာက ဘယ်ဟာက ဘယ်လို အားကာင်းလာမယ်၊ ကမ္ဘာ့နိုင်ငံများကို ဘယ်လိုထိရောက်လာနိုင်မှာလဲ ?
ဆိုတာကို လည်း စဉ်းစားကြရပါမယ်။
ဒေါ် အောင်ဆန်းစုကြည် သွားခြင်းသည် နိုင်ငံတကာက အသိအမှတ်ပြုလက်ခံထားကြသည့် ဥပဒေများဖြင့်လည်း အလွန်ပင်ညီပါတယ်၊
နိုင်ငံကို အမူဖွင့် တရားစွဲ လိုက်သည့်အတွက်
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်သည် ရွေးချယ်ခံအစိုးရ၏ အဖွဲ့ဝင်လည်းဖြစ်ပါတယ်၊
ပြည်သူ ပြည်သားများမှ မဲပေးရွေးချယ်တာဝန်အပ်နှင်းထားပါသောလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်အားလုံးပါဝင်ဖွဲ့စည်းထားသည့်
(နိုင်ငံတော်၏အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်ဆိုင်ရာဥပဒေ ပုဒ်မ(၅)(ခ)) ဖွင့်ဆိုပြဌာန်းချက်)၊
ဖွဲ့စည်းပုံမှာလည်း ဘာကို ဖွင့်ဆိုထားသလဲဆိုရင် –
ပုဒ်မ (၂၁၈/ခ) နိုင်ငံတော်သမ္မတသည် မိမိ၏သဘောအတိုင်းဆောင်ရွက်ရန် ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေ ပြဌာန်းထားသည့်ကိစ္စရပ်များမှအပ ပြည်ထောင်စုအစိုးရက ဆောင်ရွက်ခွင့်ရှိသော ကိစ္စရပ်များအတွက် လည်းကောင်း၊ အဆိုပါကိစ္စရပ်များကို ပြည်ထောင်စုအစိုးရဝန်ကြီးများအားခွဲဝေအပ်နှင်းရန်လည်းကောင်း၊ ဥပဒေတစ်ရပ်ရပ်အရဆောင်ရွက်ရန်တာဝန်ရှိသောပုဂ္ဂိုလ်အားခွဲဝေအပ်နှင်းရန်လည်းကောင်း၊လိုအပ်သည့်နည်းဥပဒေများပြဌာန်းခွင့်ရှိသည်။
ဥပဒေနှင့်မကိုက်ညီတာတို့ လွှတ်တော်၏ အတည်ပြုခွင့်ပြုမူကို ရယူရမှာတို့
အစရှိသဖြင့်ရေးသားပြောဆိုကြသူများအား ဤဥပဒေဖြင့် ရှင်းပြပါရစေ၊
ICJ မှာ ဂမ်ဘီယာ၏ တရားစွဲဆိုမူသည်
လူပုဂ္ဂိုလ်ကို တရားစွဲဆိုမူမဟုတ်ပါဘဲ နိုင်ငံကို တရားစွဲဆိုတာဖြစ်ပါတယ်၊
ပုဒ်မ(၄၅၇)(ခ) ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်သည် ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်အမည်ဖြင့် တရားစွဲဆိုနိုင်သည်၊
သို့ပါသောကြောင့်နိုင်ငံ၏ အတည်တကျဖွဲ့စည်းသတ်မှတ်ထားသည့်၊ပြဌာန်းထားသည့် (Institutionalization (Institutionalise)၊
တပ်မတော်မှ လုပ်နေသမျှသော အရာရာသော ကိစ္စမှန်သ၍ကို နိုင်ငံတော်အစိုးရကဖြေရှင်းမူသည်
သို့ကြောင့် တပ်မတော်မှ တာဝန်ရှိကြသူများသည် ဘာပဲလုပ်လုပ်၊ဘာပဲပြောပြော နိုင်ငံနှင့်နိုင်ငံသားများအကျိုးကိုကြည့်နိုင်ကြဘို့လိုအပ်ပါတယ်၊
တပ်မတ်ာကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်ကို သွားပါလားဆိုသူများကိုလည်း ရှင်းပြပါရစေ၊
သို့ပေမယ်လို့အကယ်၍ တပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်ကို သီးခြားတရားစွဲဆိုပါက တရားစွဲဆိုခံရသူ ကိုယ်တိုင်မှ သွားရောက် ရင်ဆိုင်ဖြေရှင်းရမှာဖြစ်ပါတယ်၊
ပုဒ်မ(၃၃၇) တပ်မတော်သည် နိုင်ငံတော်ကာကွယ်ရေးအတွက် အဓိကအကျဆုံးသောလက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့
ပုဒ်မ(၂၀/ဂ) တပ်မတော်ကာကွယ်ရေး ဦးစီးချုပ်သည် လက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့အားလုံး၏ အကြီးအကဲဖြစ်သည်။
ထိုပြဌာန်းချက်အား ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေထဲမှာတပ်မတော်က လုပ်ပိုင်ခွင့်အာဏာကို အလိုရမက်ကြီးစွာထည့်သွင်းပြဌာန်းထားမူကြောင့်
ပြည်ထဲရေးဝန်ကြီးနှင့်အဆိုပါဝန်ကြီးဌာနအာက်တွင်ရှိနေသည့် ရဲတပ်ဖွဲ့များသည်လည်း တပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်၏ လက်အောက်ခံဖြစ်သွားပါတယ်၊
အစိုးရအဖွဲ့ဝင်ဖြစ်သည့် ပြည်ထဲရေးဝန်ကြီးကိုလည်းရွေးချယ်ခံအစိုးရ၏ အကြီးအကဲနိုင်ငံတော်သမ္မတကသာလျှင်ရွေးချယ်ခန့်အပ်တာဝန်ပေးကာ သမ္မတ၏ တိုက်ရိုက်စီစဉ်ညွှန်ကြားမူအောက်တွင်သာရှိနေရမှာဖြစ်ပါတယ်၊
တပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်သည်နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံ၏ ကာကွယ်ရေးနဲ့ လုံခြုံရေးအတွက် အရေးအပါဆုံးဖြစ်သည့် အဖွဲ့အစည်း ဌာနတစ်ခုမှ သက်တမ်းသတ်မှတ်မူဖြင့်တာဝန်ထမ်းဆောင်ရသူ အကြီးအမှူးသာဖြစ်ပါတယ်၊
တပ်မတော်သည် နိုင်ငံ၏ ကာကွယ်ရေးအတွက်အမာအင်အားတစ်ရပ်လည်းဖြစ်ပါတယ်
နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံမှာ နိုင်ငံ၏ လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အစည်းသည် နိုင်ငံတော်သမ္မတဦးဆောင်သော အစိုးရအောက်တွင်ရှိပါမှ ထိုနိုင်ငံသည်
နိုင်ငံနှင့် ပတ်သက် စပ်ဆိုင်သော ကိစ္စများအား ရှင်းလင်းရမှာနဲ့ စီမံခန့်ခွဲမူ အုပ်ချုပ်မူ မှန်သမျှသည် နိုင်ငံတော်အစိုးရ၏ အခွင့်အာဏာ ဖြစ်သလို တပ်မတော်သည်လည်း
နိုင်ငံတော်အစိုးရ၏ စီမံ ညွှန်ကြား အုပ်ချုပ်မူ၏ အောက်မှာသာရှိရပါမယ်ဆိုတာကို
မိမိတို့နိုင်ငံ၏ ပြည်သူများမှ ဆန္ဒမဲပေးကြရာတွင် ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေအား ပြင်ဆင်၊ ဖြည့်စွက်ခြင်းမပြု နိုင်သေးလျှင်တောင်မှ လွှတ်တော်များအတွင်း မဲအရေအတွက်က အသာစီးရနေနိုင်ဘို့လိုအပ်ပါတယ်၊
(၂၀၀၈) ကို(၂၀၀၈) နဲ့သာပြန်လွှမ်းမိုး၊စိုးမိုးထားနိုင်စေရန်သည် လက်တွေ့ကျသည့် လိုအပ်ချက်တစ်ရပ်ဖြစ်ပါတယ်၊
နိုင်ငံတကာမှ တရားဝင် အသိအမှတ်ပြု လက်ခံခြင်းသည် နိုင်ငံတစ်ခု၏
ဤသည်ကား ကမ္ဘာ့ နိုင်ငံများ အားလုံးက လက်ခံ ကျင့်သုံးနေကြသည့် ယဉ်ကျေးမှူ ပင်ဖြစ်ပါတယ်၊ကျင့်ဝတ်စည်းကမ်းလည်းဖြစ်ပါတယ်။
# WE STAND WITH DAW AUNG SAN SU KYI #
ဘာကြောင့် ဤစကားရပ် စာသားကို သုံးကြ လက်ခံကြပါသလဲဆိုတာကို ရှင်းပြပါမယ်၊
မိမိတို့နိုင်ငံ၏ ယခုအခြေအနေ အခင်းအကျင်းသည်ကား –
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်သည် မိမိတို့နိုင်ငံအတွက် အားဖြစ်သလို၊
မိမိတို့နိုင်ငံသားများ၏ စည်းလုံး ညီညွတ်မူနဲ့ စုပေါင်းအင်အားများကလည်း၊
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်မှ ပြသာနာများအား ရင်ဆိုင်ဖြေရှင်းရန်အတွက် အင်အားများ ဖြစ်ပါတယ်။
ထိုသည်က မိမိတို့ ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်ကြီး နဲ့တကွ တိုင်းရင်းသား နိုင်ငံသား ပြည်သူ အားလုံးအတွက် ညီညွတ်ပြီးကောင်းကျိုးချမ်းသာမူများဖြစ်လာနိုင်ခြင်းအတွက်လိုအပ်မူဘဲ ဖြစ်ပါတယ်။
မိမိတို့နိုင်ငံ၏ စည်းလုံးညီညွတ်မူနဲ့ ဂုဏ်သိက္ခာဘဲဖြစ်ပါတယ်။
ဥပဒေပညာရှင် တစ်ချို့က ဆိုကြပါတယ်၊
ယခင်က ဖြစ်ခဲ့ ကြသော နိုင်ငံများ၏ ဖြစ်စဉ်များအရ ICJ တွင်အမူရင်ဆိုင်ဖြေရှင်းမူသည် ကြာပါမည်ဟူ၍ ပြောဆိုနေကြပါတယ်၊
သို့ပေမယ့် စာရေးသူ ယူဆမူကို တင်ပြပါရစေ။
ယခု မိမိတို့နိုင်ငံအား OIC အုပ်စုမှစွပ်စွဲမူသည် လက်ခံသည့် ကမ္ဘာ့အခြမ်းနှင့် လက်မခံလိုသည့် ကမ္ဘာ့အခြမ်းများ ရှိလာပါတယ်။
နိုင်ငံရေးပြသာနာများ၊ အချုပ်အခြာပြသနာများ၊အထွေထွေရွေးကောက်ပွဲ မှဖြစ်လာမည့် ရွေးချယ်ခံအစိုးရများ၏အထိုင်တကျဖြင့် သက်ဆိုင်ရာ နိုင်ငံကို ဥပဒေပြဌာန်းနိုင်မူများ ဖြင့်ထိန်းကြောင်းအကျိုးပြုနိုင်မူများသည် ယနေ့တွင် ကမ္ဘာ့နိုင်ငံကြီးများအပါအဝင်၊
နိုင်ငံများစွာ ရင်ဆိုင်နေကြရသည့် နယ်စပ်ဖြတ်ကျော်ကိစ္စများ၊
စသည်ဖြစ် နိုင်ငံတိုင်းမှရင်ဆိုင်နေကြရပြီး၊ မိမိတို့နိုင်ငံသည် ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေ၏အကြပ်အတည်း၊အရူတ်အထွေးများရှိနေမူကြောင့် နိုင်ငံတစ်ကာ၏ စာင့်ကြည့်နေကြမူများက အလွန်များလှပါတယ်။
သို့ပါသောကြောင့် ICJ မှာ တရားရင်ဆိုင်ဖြေရှင်းမူက အချိန်ကြာလှမည် မဟုတ်ပါလို့ပြောပါရစေ။
သို့ကြောင့် မိမိတို့နိုင်ငံအတွက်ငွေကြေးချမ်းသာပြီးကမ္ဘာ့ကုလသမဂ္ဂတွင် အုပ်စုဖွဲ့၍
သူတို့ လိုချင်၊ဖြစ်ချင်သော ဆုံးဖြတ်ချက်များကျလာနိုင်စေရန်အတွက် အုပ်စုဖွဲ့ထားသော
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် အား အရပ်ရပ်အဖွဲ့ အစည်း လူပုဂ္ဂို လ်များမှ နိမ့်နိမ့် ပါးပါး စွပ်စွဲ အပုတ်ချကြခြင်းကို ရပ်တန်းက ရပ်ကြ ခြင်းသည် မိမိတို့နိုင်ငံအတွက် ကောင်းမွန်သည့်ပြုမူ ကြခြင်းဖြစ်ကာ –
ဆင်ချင်မူများသည် ကိုယ့်နိုင်ငံနှင့်ကိုယ့် နိုင်ငံသားများအတွက် ကောင်းကျိုးဆောင်ခြင်းသာဖြစ်ပါတယ်၊
ယနေ့ မိမိတို့နိုင်ငံအား ကမ္ဘာ့နိုင်ငံ အချို့၏ အမြင်ဆိုးများကိုပြောင်းလဲနိုင်စေသူမှာ
ယခုကျင်းပပြီးခဲ့သည့် (၂၀၂၀) အထွေထွေရွေးကောက်ပွဲတွင်လည်း ကမ္ဘာ့နိုင်ငံများစွာက မကြုံဖူးသော၊ ပြည်သူ လူထုများစွာ၏ ဝန်းရံ အားပေး ထောက်ခံမူအမြင့်မားဆုံးဖြစ်ခဲ့တာကို ကမ္ဘာ့အသိုက်အဝန်းကလည်း အသိအမှတ်ပြုကြကာ၊လက်ခံလိုက်ကြသည်ကိုမိမိတို့ပြည်သူများက ဂုဏ်ယူဝမ်းသာ လက်ခံကြ၍ ငြိမ်းချမ်းရေးနှင့်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်သော ညီညွတ်မူများ တည်ဆောက်ကြရင်း
ဒီမိုကရေစီစနစ်ဖြင့် ဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုကြီးအဖြစ် အတူတကွ စုပေါင်းအားများဖြင့်ထူထောင်ကြရမှာ မဟုတ်ပါလား၊
နိုဝင်ဘာလ(၈) ရက်နေ့မှာကျင်းပပြီးခဲ့သည့် အခြေအနေများကို ပြောဆိုနေကြပါသော
နိုင်ငံရေးရေချိန်မြင့်စွာဖြင့်ဆန္ဒမဲများကိုပေးကြမူဖြစ်တယ်ဆိုတာ လယ်ပြင်မှာ ဆင်သွားသကဲ့သို့ ရှင်းရှင်း လင်းလင်း မြင်နေကြရပါပြီ၊
ကမ္ဘာ့ကုလသမဂ္ဂအဖွဲ့အစည်းကြီးအပါအဝင် နိုင်ငံတစ်ကာ အသိုက်အဝန်းမှ လွတ်လပ် တိကျသည့်ရွေးကောက်ပွဲဖြစ်ပါသည်ဟု
သို့ဖြစ်ပါသောကြောင့် ယခင်ကာလများကဲ့သို့ နိုင်ငံတော်အာဏာကို ပြန်လည်မက်မောပြီး၊ အာဏာအပူ သောကမီးများဖြင့် ဥပဒေမဲ့ ပြောဆိုခြင်းနှင့် တိုင်းပြည်ကို ဝရုန်းသုံးကားဖြစ်စေမူ၊ပြောဆိုမူများကိုလျှော့ချကြဘို့လိုအပ်ပါတယ်၊
ပိုပိုပြီးကောင်းသထက်ကောင်းမွန်လာစေရန်အတွက် ဘယ်၍ ဘယ်ပုံသွားကြမှာလဲဆိုတာကို စဉ်းစား ဆင်ချင်နိုင်ကြဘို့ လိုအပ်လာပါပြီ၊
တည်ဆဲဥပဒေများဖြင့် အရေးယူ အပြစ်ပေးခံကြရမှာက အောက်ခြေပါတီဝင်များသာဖြစ်ပါတယ်၊ သူတို့ရဲ့မိသားစုများကသာ ရှိစုမယ့်ငွေကြေးလေးများကုန်၍ စားသောက် နေထိုင်မူများက ဒုက္ခရောက်ကုန်
ဤကဲ့သို့သောအကြောင်းအချက်များကို ထောက်ရှု သုံးသပ်ကြပြီး၊
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်သည် ငါတို့ ဖြစ်သည်၊
မိမိတို့လိုချင် တောင့်တခဲ့ ကြကာ၊
သဘောတူလက်ခံထားကြသည့် ဒီမိုကရေစီဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုကြီးဆီသို့အတူတကွ သွားလိုက်ကြပါစို့၊
ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်၏ အကျယ်အဝန်းသည် စတုရန်းမိုင် (၅၆၉၇၇) ရှိပြီး လူဦးရေ (၁၆၄ ) သန်းကျော်ရှိပါတယ်။
ရခိုင်ပြည်၏ အကျယ်အဝန်းသည် (၁၄၂၀၀ .၀၈) စတုရန်းမိုင်ရှိကာ
ယခင်က ရခိုင်ပြည်၏ အကျယ်အဝန်းက ၂၈၀၀၀ စတုရန်းမိုင်ရှိခဲ့ ပြီး ၁၄၀၀၀ က ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှမှာ ကျန်နေခဲ့တယ်လို့လည်း ဆိုကြတာကို ဖတ်ခဲ့ရပါတယ်၊
လူဦးရေ (၃၄၀၀၀၀၀ ) /(သုံးသန်းလေးသိန်းကျော်ရှိပါတယ်)၊
ဆိုသည်ကိုလည်း မှတ်သားသိကြပါစေရန်လည်း တစ်ပါတည်း ရေးသားတင်ပြလိုက်ရပါတယ်။
အလေးထားစွာဖြင့် .ကိုသိန်းဌေး ပဲခူး၊
ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်ပင်မ(RASU) ရူပဗေဒ တတိယနှစ်ကျောင်းသား ကျွန်တော်